Semalt Shares 10 mora mora ny manatsara ny SEO
Rehefa miresaka momba ny fahitana an-tserasera sy fikarohana fikarohana, ny iray amin'ireo zavatra mahazatra indrindra tonga ao an-tsaintsika dia ny fomba hanatsarana ireo pejy sy hampiasa ireo famaritana meta ary koa ireo teny manan-danja amin'ny votoatintsika . Misy tetikady sy fomba samihafa tokony hikarakaranao, na manao SEO na pejy SEO ao amin'ny pejy ianao. Ny aterineto dia tontolon'ny tranokala marobe, ka azonao atao ny mitondra ny marika ao amin'ny milina fikarohana raha tsy fantatrao ny fomba hifaneraserana amin'ny mpihaino.
Ireto misy fitsapana kely avy amin'i Jason Adler, mpitantana ny Success Successor an'ny Semalt , mba hanatsarana ny SEO
№1 Fanatsarana ny toerana misy anao ao an-toerana
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia manatsara ny lisitra eo an-toerana misy anao. Tena ilaina ny tsy fitoviana eo amin'ny World Wide Web, ary mety ho sarotra ho an'ny olona ny mandany fotoana betsaka amin'ny tranokalanao - computer tech support company in Portland. Izany no antony tokony hisarihana azy ireo ho an'ny fanadihadiana mivantana sy mahagaga. Ny lisitra eo an-toerana dia ny laharan-telefaona, ny adiresy, ny mailaka ID, ary ny vaovao hafa. Amin'ny fanomezana azy ireo ho an'ny mpanjifanao dia azonao antoka fa eo am-pelatanana izy ireo ary vonona ny handray ny baikony am-panambadiana.
# 2 Mitondra ny lazanao
Zava-dehibe ny mitantana ny lazanao an-tserasera. Ho an'ity, tokony hifantoka amin'ny fanamafisana hevitra marobe, fanamarihana tsara ary fanamarihana an-tserasera sy fanadihadiana izay miresaka momba ny maha-ara-drariny anao sy ny fahamendrehanao. Izany dia hanome fitaovam-panadiovana ho an'ny fahamendrehana sy ny fifantohana amin'ny raharaham-barotra ataonao.
№3 Miverena foana ny lisitry ny teny fanalahidy
Tsy maintsy mamerina amin'ny laoniny foana ny lisitry ny teninao. Raha mamorona lahatsoratra maro isan 'andro ianao, dia tsy maintsy maka antoka fa tsy misy teny fanalahidy averina averina..Azonao atao koa ny mametraka fotoana ao anatin'ny herinandro ary manao lisitry ny teny fanalahidy tianao hotratrarina amin'ny andro ho avy.
# 4 Aza mitsitsy ny SEO amin'ny tranokalam-pandraharahana
Ny orinasa samihafa dia mitahiry SEO ho an'ny tranokalan'ny orinasa. Raha manao toy izany ianao, avelao aho hilaza aminao fa manao fahadisoana lehibe ianao. Raha tokony ho izany dia tokony handany ny lohatenin'ny pejy, ny famariparitana, ny votoatiny sy ny sary ianao indraindray.
№5 Mamorona Content Tsara
Tsy afaka manadino ny lanjan'ny lahatsoratra kalitao sy ny fampiasana tsara ny teny fanalahidy ao amin'izy ireo isika. Tsy mila mamoaka lahatsoratra marobe mendrika ianao isan'andro. Raha tokony ho izany dia tokony hifantoka amin'ny famoahana ny kalitao ianao ary hihazona hatrany ny fahitana ny tranokalanao.
# 6 Ampifandraiso ny toerana misy anao
Raha manana tranonkala maro ianao, dia mety ho tsara ny mampifandray azy ireo. Iray amin'ireo teknika SEO tsara indrindra izy, ary manam-pahaizana maro no manoro izany amin'ny mpanjifany.
No.7 Ampiasao ny Teninao
Rehefa mamorona rohy ianao, dia tsy maintsy mampiasa ny teninao manokana ianao ary tsy mitsahatra miantehitra amin'ireo teny amin'ny tranonkala hafa. Tokony hampiasa endri-tsoratry ny endri-tsoratra foana ianao ary hanome rohy amin'ireo lahatsoratrao samihafa mba hahafahan'ireo mpampiasa misimisy kokoa.
№8 Aza manadino ny fandefasanao YouTube
Raha te-hahazo ny laharana tsara amin'ny valin'ny fikarohana ianao, dia tsy tokony hanadino velively ny fantsona YouTube anao sy ny fifandraisana amin'ny tranokalanao. Ampitao ireo lahatsary mahomby ao amin'ity fantsona ity ary ny Google dia manome ny mari-boninahitra sy ny toerana tsara indrindra. Ampidiro ao amin'ny lahatsorinao ireo horonan-tsarinao mba hisarihana olona marobe.
№9 Mitazona ny fiarahamoninao sosialy
Ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra hahombiazana eo amin'ny aterineto dia ny fiaraha-monina sosialin'ny olona. Tokony hampiasa tsy tapaka ny Facebook, Twitter, LinkedIn, ary Google+ ianao, izay tranonkala serasera tsara indrindra
#10 Mobile no lakilen'ny 2017
Marina fa mety hitarika mpitsidika maromaro ny tranokala maotona. Ataovy ny valin-teninao sy ny Google amin'ny namana mba hahazoana vokatra tsara. Google dia manome ny laharana tsaratsara kokoa amin'ireo tranonkala azo jerena amin'ny fitaovana rehetra amin'ny fomba tsara kokoa.